Indlu IDA Stična - Apartment IDA
Yiva intsomi eluhlaza, yendawo engqonge ilali yaseStična kwenye yeeflethi zethu ezi-5 ezitofotofo ezinemigangatho emibini, zibekwe kwiNdlu yethu yakudala ye-Ida.
✨ujonge indawo etofo-tofo-apartemnet IDA yeye 4 pepole kwaye inebhedi ezi-4 ezitofo-tofo.
✨ujonge amagumbi axhotyiswe ngokupheleleyo
🛏 ibhedi ethambileyo, entle kunye neetawuli
❤ uthando ubomi belali- kodwa kufutshane nezixeko
🏞thanda indalo, amahlathi, imithombo kunye nemilambo
❤ ujonge ububele obufudumeleyo
❤ ukuthanda ukuhamba intaba, ukuhambahamba, ukuloba
Le 40m² yendlu yabantu aba-4 ine:
￫ igumbi lokulala elikhulu elinendawo eninzi yokugcina kunye nombono omangalisayo weStična Cistercian Monastery.
￫ indawo yokuhlala eqaqambileyo ene-TV kunye ne-AC kunye ne-WI-FI YAMAHHALA
igumbi le-mansarde elahlukileyo elineebhedi ezi-2
￫ indawo yokutyela;
￫ igumbi lokuhlambela labucala elineshawa, lixhotyiswe ngeshampu, isepha, umatshini wokuhlamba
￫ ikhitshi elincinci kodwa elisebenzayo, elixhotyiswe ngokupheleleyo elinesitovu kunye ne-oveni, isifudumezi-manzi
Sikwabonelela (simahla ukuba sisetyenziswe):
★iibhedi ezicocekileyo, imiqamelo neengubo ezongezelelekileyo, iitawuli ezintsha, izinto zegumbi lokuhlambela, iimveliso zokucoca, izinto ezisisiseko ekhitshini (i-oyile, iviniga, ityuwa, iswekile, ikofu, iti,.), iipani,iiglasi, iikomityi, ikhitshi. intsimbi, isixhobo sokomisa iinwele
Ngaba ♥ indawo yethu?
UBomi bonke luhambo-vumela enye yeendlela zakho ikukhokelela kuthi ❤🏞
BHEKISELA NAMHLANJE kwaye uzenzele iholide egqibeleleyo yenkuthazo eluhlaza
Indlu yethu yokuhlala ibekwe kumbindi welali yembali iStična, ijikelezwe ziinduli eziluhlaza kunye nentsomi yendalo enyulu, ngaphaya kwendlela neCistercian Monastery, kodwa iikhilomitha nje ezingama-26 ukusuka kwikomkhulu ledolophu iLjubljana.
Imarike yethu yasekhaya kunye nosilarha ziziimitha ezili-10 ukusuka kwindlu
Unokufumana ikhemesti, indawo yokubhaka, iivenkile ezinkulu, isikhululo sepetroli, i-ambulensi, ibhanki kunye neposi, kunye ne-sauna, indawo yokuzivocavoca umzimba kunye neevenkile ezincinci kwi-1,5 km ukusuka kwindlu yethu-e-Ivančna gorica.
➀Iindwendwe zingonwabela ukuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile kwindalo engonakaliswanga.
➁ Iindwendwe zinokuodola isidlo sakusasa se-alcart kwindawo entle yokuphumla yekofi esezantsi, okanye zonwabele kwiziselo zasekuhlaleni kunye nokutya okutyiwayo.
➂Uluhlu lweendawo zokutyela ezikungqongileyo zikulindile kwigumbi lakho
➃ Iingcebiso zohambo oluya kwimiqolomba yasekhaya, umlambo, iilwandle zendalo, iicastels kunye ne-thermal spa ikulindile kwigumbi..akukho ndawo ingaphezulu kwemizuzu engama-25 kude
➄Le ndlu ibekwe ngasekunene kwenduli ebizwa ngokuba yiGradišče nad Stično- iimbono ezimangalisayo, ukutshona kwelanga, indalo enyulu embindini wehlathi...nirvana-ukutya okulungileyo kunye nokuphumla
💭Makhe ndikuxelele enye into; indlu yethu yindlu kamakhulu wethu Ida, kwaye wayelinenekazi elinomdla kakhulu kunye noodade bakhe, ohlala apha naye.Omnye wabo nguKristina Novaković Gorišek odumileyo- wayengumqhubi wokuqala we-balkan motor kwaye endlwini yethu sanikezela igumbi elinye kumsebenzi wakhe kunye nempumelelo yakhe.
Ngaba ♥ imimoya kunye itshokolethi?
Kufuneka undwendwele kwaye uzame:Ibhongo lethu lengingqi iBerryska Distillery kunye neChocolatier ikunika uluhlu lwemimoya, iiliqueurs kunye neetshokholethi ezenziwe ngezandla.UBerryshka unebhongo ngokuba liwonga lehlabathi laseSlovenia eliphumelele ibhaso lomgangatho weprimiyamu.
Ekoneni yendlu yethu kukho isikhululo sebhasi, ngoko unokukhwela ibhasi ukuya kumbindi wedolophu yaseLjubljana-ixesha linikwe kwigumbi.Iibhasi zihamba kaninzi ngemini ukuya nokubuya eLjubljana.
Ingingqi yaseDolenjska yeyona ndawo intle kakhulu- ilali yaseStična iphantse yaba sembindini welizwe lethu elincinci, elimnandi..ikhilomitha nje eyi-1,5 ukusuka kuhola wendlela.ngoko naphi na apho uya khona...ungafika ngokukhawuleza..KODWA KUNINGI ESINOKUKUBONISA.awufuni kuya kwenye indawo 😊
❶I-monastery yaseCistercian ehlala kwidolophana yaseStična (Sitticum) yenye yezona zikhumbuzo ezibalulekileyo zembali yaseSlovenia.Yakhiwa ngo-1136 nguPeregrin I, owayengusolusapho waseAquilea ngoko. Kungekudala yaba lelinye lamaziko amakhulu enkcubeko nezoqoqosho kwiindawo ezazihlala abantu baseSlovenia ngelo xesha, ezaziwa kakhulu ngemibhalo-ngqangi ebizwa ngokuba yiStična Manuscripts (Stiški rokopisi), uthotho oludumileyo lwemibhalo-ngqangi yamandulo ekhanyisiweyo ebhalwe ziimonki zaseCistercian.Lo mzi woonongendi, osaqhubeka ulikhaya leemonki, ngoku uneMyuziyam yonqulo yaseSlovenia.
❷I-CAVES- sinazo👍 Županova jama, owona mqolomba umhle kakhulu ongaphantsi komhlaba kwingingqi yeDolenjska, ibekwe kufutshane nelali yaseCerovo. , amachibi angekho nzulu e-calcerous sinter, kunye namatye athontsizayo omkhenkce ebusika.
❸I-CASTELS: Inqaba yaseBogenšperk ithathwa njengenye yezona nqaba zintle eSlovenia kwaye yenye yeendawo ezihlala abantu baseSlovenia 'ezona zikhumbuzo zenkcubeko zibalulekileyo.Yakhiwa kwisiqingatha sokuqala senkulungwane ye-16.
✨Ungaphoswa yindawo entle engqonge inqaba yase-Otočec, ekuphela kwenqaba emi kwisiqithi serivet eSlovenia.Ipaki yenqaba entle kakhulu kusenokwenzeka ukuba yasekwa ekuqaleni kwe18th ukuya kwinkulungwane ye-19.
✨Enye yezona nqaba zibukekayo eSlovenia, iNqaba yeŽužemberk yaqalwa ngenkulungwane ye-13 kodwa yafumana ukumila kwayo ngoku ngenkulungwane ye-16 xa ukhuselo lwayo lomelezwa ngeenqaba ezinkulu ezingqukuva ezisixhenxe.
❹ 🐴🐰🦌kubantwana: Ipaki yezoo yePrivat- Ranč Aladin - ilungele iintsapho ezinabantwana: izilwanyana, indawo yokudlala yechlidren ebekwe kwindalo
❺Iispa ze-Thermal---zonke ezisijikelezileyo: i-Terme Dolenjske toplice, Terme Šmarješke toplice, Terme Čateške toplice....ulonwabo oluninzi, izilayidi..zabantwana...kunye nokuphumla kwabantu abadala
TYELELA KWINGINGQI YETHU IINTSUKU EZIMBALWA, KHUMBULA UBOMI BONKE!
Indlu yaseIda, eStična eSlovenia
Usapho lwethu luhlala kwiyadi enye, kwaye siyafumaneka ngalo naluphi na ulwazi okanye uncedo onokulufuna ngexesha lokuhlala kwakho:
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi nangaliphi na ixesha (ubuqu okanye ngefowuni). Silapha ukunceda nangayiphi na indlela okanye siza kukushiya ubucala ngokupheleleyo; konke kuxhomekeke kwisigqibo sakho.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi nang…